Kuona chirwere chemoyo nechitarisiko-uye imwe AI
Meno chigaro PU furo zvigadzirwa
Gait Dzidziso Series
Manual unweight gait kudzidzisa maitiro
Electric unweight gait hurongwa
Two-nzira kudzidzisa masitepisi
Three-nzira kudzidzisa masitepisi
Kufamba furemu pamwe castors
Kufamba pepuranga pamwe chigaro uye akamedura
Folding kufamba furemu
Akangwara Rehab Robot
Lumbar traction dzino
Lumbar uye remuromo traction mubhedha
Manual lumbar remuromo traction mubhedha
Electric lumbar remuromo traction mubhedha
3D lumbar remuromo traction mubhedha
Computer pehurumende lumbar remuromo traction mubhedha
Remuromo traction cheya
Motor pehurumende remuromo traction cheya
Microcomputer pehurumende remuromo traction cheya
Papfudzi uye gokora CPM
Elbow CPM (Desk mhando)
Elbow CPM (Vertical mhando)
Muviri wese kurovedza nhevedzano
Upper richiripo Rehabilitation Series
Kudzikisa richiripo Rehabilitation Series
Multi-basa vapore dzakatevedzana
Kurapa Mubhedha Series
Kubasa Therapy Series
Vana Reformation Series
Zvepanyama Therapy Series
Achicherechedza mwoyo chirwere ane Kutarira-uye vamwe AI
Google vatsvakurudzi vanoti algorithm ravo idzva kuona mikana yako chemwoyo.
Vatsvakurudzi Google yaro munun'una boka, Zvirokwazvo Life Sciences, vakazivisa kuti kushanda pakuvheneka kumashure zvomurwere ziso ravo idzva chakagadzirwa njere algorithm anogona kuongorora ngozi matambudziko cardiac.
Kudzidza, yakabudiswa mumagazini inonzi Nature anorapa achishandisa mitemo Engineering, kunoratidza kuti kuburikidza ongorora Scans, kuti AI algorithm anogona kuziva zvemwoyo zvinokonzera njodzi, dzakadai wacho zera, chechikadzi uye BP. Kuongorora anogona kufanotaura mukana mwoyo kurwisa uye sitiroko.
Izvi nzira itsva aigona kupa anokurumidza rikurumidze uye ongororo pane tsika miedzo ropa. Saka kure, ongororo inoratidza kuti AI algorithm migumisiro nehasha chakarurama sezvo nzira ano.
Zvokutsvakurudza anomuzarurira zvakawanda zvingangoitika AI kuti achitaurwa nevanopinda mukuvandudza muchipatara tsika. "Vari kutora mashoko izvo ratorwa rimwe chikonzero kurapwa uye kuwana zvakawanda kubva pairi kupfuura isu parizvino kuita. ... Pane kutsiva vanachiremba, zviri kuedza kuwedzera zvatinokwanisa chaizvoizvo kuita, "Ruka Oakden-Rayner, yokurapa mutsvakurudzi paUniversity Adelaide uyo ane unyanzvi mubasa muchina kudzidza pachisara akaudza The megomba.
Nguva yekutumira: Aug-10-2015
Vakagadzirisazve kugadzirisa zvekurapa zvishandiso senge traction akateedzera, Exercise akateedzana, ekushanda ekurapa zvishandiso, anoshanda ekuongorora akateedzera, yekudzidzira tafura yakateedzana, akabatsira nhurikidzwa dzakateedzana, varwere vachifamba vachisimudza, masiki nezvimwe zvinoshandiswa, nezvimwewo.
© Copyright - 2010-2017: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.